नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू | Twitch फलोअरहरू किन्नुहोस् | स्ट्रिम्युलर
नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू | Twitch अनुयायीहरू किन्नुहोस्
नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरूको साथ तपाईंको ट्विच च्यानल पहिले भन्दा छिटो बढाउनुहोस्!
हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुहोस् नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू प्राप्त गर्नका लागि जुन वास्तविक र तपाईंको आलामा लक्षित छ, वा केवल थप द्रुत बृद्धिको लागि ट्विच अनुयायीहरू किन्नुहोस्।
नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू पाउनुहोस् or ट्विच अनुयायीहरू किन्नुहोस्
यदि तपाईं योजना सक्रिय गर्न प्रत्येक दिन केहि मिनेट लिन आपत्ति राख्नुहुन्न भने, हामी उत्कृष्ट विकल्पहरू प्रदान गर्दछौं जुन प्रति दिन १० नि: शुल्क अनुयायीहरू र २० नि: शुल्क ट्वीच मनपर्दछ।
आफैं जस्ता स्ट्रिमरहरूले यस एक्सचेन्ज सेवालाई अन्य स्ट्रिमरहरू बीच पछाडि ग्राहकहरू अघि बढाउन प्रयोग गरिरहेका छन्।
स्ट्रिमुलरको सेवा सुरक्षित र सुरक्षित छ! ट्विच च्यानलहरू हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नको लागि दण्डित हुँदैन र हामी गोपनीयता, सुरक्षा र कडा गोपनीयताका साथ संचालन गर्दछौं।
यदि तपाईं सहजै गर्न चाहनुहुन्छ र स्वचालित रूपमा ट्विच फॉलोअर्स र प्रत्येक दिन मनपराउँन चाहानुहुन्छ, भने हामी शून्य-प्रयास, दैनिक बृद्धि प्राप्त गर्नको लागि सशुल्क योजना सिफारिस गर्दछौं!
म नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू चाहान्छु!
यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईंको ट्विच च्यानलको बृद्धि मिनेटमा गर्नुहोस्!
तपाईंको च्यानल बढावा दिनुहोस्
बढ्दो ट्विच फलोअरहरू नि: शुल्कका लागि
ट्विच इन्टरनेटमा सब भन्दा छिटो बढ्ने सामाजिक प्लेटफर्म हो। प्रत्येक महिना दुई मिलियन भन्दा बढी अनुयायीहरू स्ट्रिम गर्दै, टिचिच युवाहरू मात्र होइन तर पुराना पुस्ताहरूमा पनि लोकप्रिय छ। भिडियोहरू अनलाइन गेमिंगमा, प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरू खोजिरहेका सामग्रीको बारेमा मात्र पाउन सक्छन्।
सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष स्ट्रीमि platform प्लेटफर्म
के तपाईंलाई थाहा छ ट्विच विश्वको सबैभन्दा ठूलो भिडियो स्ट्रिमि streaming प्लेटफर्म हो? यसको प्रारम्भिक सुरुवात पछि, यसले million मिलियन आगन्तुकहरू प्राप्त गर्‍यो। आज, ट्विचले अनलाइन भिडियो गेमि content सामग्री द्वारा उत्पन्न गरेको सबै आयको लगभग% 8% ओगट्छ। यो अनिवार्य रूपमा जहाँ लाइभ स्ट्रिमरहरू उनीहरूका अनुयायीहरूको लागि उनीहरूको सामग्री स्ट्रिम गर्दछन्। यो केवल अनलाइन खेलहरूमा मात्र सीमित छैन - कलाकारहरूको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको काम प्रदर्शन गर्न "क्रिएटिभ" सेक्सन उपलब्ध छ।
मनोरञ्जनको पछाडि, ट्विच एक सक्रिय समुदाय पनि भएको छ जहाँ साझा रुचि र रुचि राख्नेहरूले साझा मैदान फेला पार्न सक्दछन्। च्याट कोठा र प्रत्यक्ष कमेन्ट्री मार्फत कुराकानीले ट्विचलाई अनुभवलाई बढी जोडिएको र जीवन्त बनाउँदछ। स्ट्रिमरको साथ फ्यानहरूलाई जोड्दै, ट्विचले लामो पनी प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा उपलब्ध रोचक सामग्री हेर्नका लागि प्रयोगकर्तालाई स्थिर प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।
किन म ट्विचमा अनुयायीहरू हुनु पर्छ?
केवल सामग्री अवलोकन गर्नका लागि मात्र होइन, तर टिभिच धेरै स्ट्रिमरहरूको लागि राजस्वको अनिवार्य स्रोत भएको छ। स्ट्रीम गर्नेहरूलाई प्रायः थाहा हुन्छ कि धेरैजसो दर्शक फर्कनेछन् र पछ्याउँनेछन्। ठूलो संख्यामा अनुयायीहरूले तपाईंको स्ट्रिमरको रूपमा प्रतिष्ठा सुधार गर्न सक्दछन्।
यदि तपाईंलाई छिट्टै अनुयायीहरू चाहिन्छ र यसमा न्यूनतम प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले ट्विच अनुयायीहरू किन्न सक्नुहुन्छ तपाईंको बृद्धि गति सार्नको लागि।
हालका वर्षहरूमा, ट्विचले स्ट्रिमरहरूलाई ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। ट्विचमा स्ट्रिमरहरूले बिभिन्न तरीकाले पैसा कमाउन सक्छ, जस्तै विज्ञापनबाट चन्दा, अनुदान, सदस्यता, व्यापारिक कारोबार, र सम्बद्ध लिंकहरू। अग्रणी ट्विच प्रयोगकर्ताहरूले स्ट्रिमि aलाई एक व्यावहारिक क्यारियर विकल्प बनाएका छन्, केहि प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक महिना $ ,350,000$,००० सम्म कमाउँछन्। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ ट्विचलाई तपाइँको कार्यक्षेत्र बनाउन चाहानुहुन्छ, त्यहाँ धेरै रचनात्मक तरिकाहरू छन् जुन तपाइँ यसलाई एक आय स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको ट्विच खाताबाट कमाउन चाहानुहुन्छ, तपाइँसँग एउटा ट्वीच एफिलिएट हुनु आवश्यक छ, जुन केवल तपाइँको ट्विच च्यानलमा कम्तिमा followers० अनुयायीहरू भएको बेला मात्र सम्भव छ। धेरै संख्यामा अनुयायीहरूले तपाईंको स्ट्रिमरको रूपमा तपाईंको प्रतिष्ठा बढाउन र तपाईंलाई थप आम्दानी गर्न र ट्वीचमा प्रख्यात हुन सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।
आय भन्दा पर, त्यहाँ असंख्य कारणहरू छन् जुन तपाईंले हालसालै ट्विच अनुयायीहरूको अनुपात बढ्दो मान्नु पर्छ। यी मध्ये केहि तल हेरौं:
१. ब्रान्ड जागरूकता
कमाई ब्रान्ड मान्यता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग उद्देश्यहरू मध्ये एक हो। यदि तपाईं व्यापार अनलाइन बढ्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले निश्चित रूपमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। यो किनभने उपभोक्ताहरू आफ्ना संसाधनहरू उनीहरूले पहिचान गरेको ब्राण्डमा खर्च गर्न चाहन्छन्।
सामाजिक मिडिया एक उत्तम उपकरण हो जुन प्रभावकारी र द्रुत ब्रान्ड निर्माण सक्षम गर्दछ। यसले अरूको अगाडि तपाईंको ब्रान्ड प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ तर चाँडो र सजीलो रूपमा। यसले दर्शकहरूलाई तपाइँको ब्रान्ड प्राय: हेर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, र जब मानिसहरूले तपाइँका उत्पादनहरूको बारेमा सोच्दैनन् पनि।
ब्राण्ड निर्माण भारी रूपमा देखा पर्दछ, त्यसैले तपाइँको अनलाइन उपस्थितिमा लगानी गर्न समय लिनुहोस्। आकर्षक दृश्य तत्वहरू अपलोड गर्नुहोस् जस्तै राम्रो कभर र प्रोफाइल फोटोहरू। तपाईं को बारे मा सजिलै संग पहुँच योग्य जानकारी बनाउनुहोस्, तपाईं को हुनुहुन्छ सहित, तपाईं के गर्नुहुन्छ, तपाईंको सोशल मिडिया च्यानलहरू, र तपाईंलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ भनेर।
२. कारण कुराकानी गर्दै
कुनै पनि मुद्दामा चेतना जगाउने सब भन्दा द्रुत तरीकाहरू मध्ये एक यसको बारे सोशल मिडियामा पोष्ट गर्नु हो। सामग्री धेरै पटक फरवार्ड गर्न सकिन्छ, जसले धेरै व्यक्तिद्वारा यसलाई हेर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं एक खास कारणको वरिपरि सार्वजनिक ध्यान जम्मा गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई रेकर्ड गर्नुहोस् र यसलाई ट्विचमा प्रमोट गर्नाले तपाईंलाई यो उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सकारात्मक सामग्री सजिलै ठूलो दर्शकहरु आकर्षित गर्न र तपाइँलाई लोकप्रिय बनाउन सक्छ। सहि ह्यासट्याग प्रयोग गर्नाले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सोशल मिडिया प्रोफाइलहरूबाट तपाईंको ब्रान्ड पृष्ठमा र अन्तत: तपाईंको वेबसाइटमा निर्देशन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई लगानीमा उत्कृष्ट प्रतिफल दिन्छ।
यातायात मा वृद्धि
एक मजबूत सामाजिक मिडिया उपस्थिति तपाइँ तपाइँको सामग्री को ट्राफिक वृद्धि गर्न सक्षम गर्दछ। सोशल मिडियाले तपाईंको च्यानलको ट्राफिकको वृद्धिलाई योगदान पुर्‍याउने क्रममा, तपाईंले खोज ईन्जिनहरूबाट ट्राफिक पनि बढ्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाको साथ सहयोग गर्न, यो विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं के पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ र कति पटक तपाईं सामग्री साझा गर्नुहुन्छ। यी चीजहरूको विचार गर्नाले तपाईंलाई सहि उपभोक्तालाई लक्षित गर्न र तपाईंको अनलाइन मार्केटिंग प्रयासहरूलाई बढावा दिन अनुमति दिनेछ।
G. बढ्ने अवसरहरू
अनुयायीहरूको अनलाइन कडा समुदायको विकास भनेको तपाई एक प्रभावशाली हुन सक्छ। यो अनुवाद गर्न सक्दछ तपाईंको अधिक अनलाइन व्यापारलाई मद्दत पुर्‍याउने अवसरहरू। भुक्तान गरिएको पदोन्नतीहरू, सहयोगहरू, र सह-ब्रान्डि yourले तपाईंको व्यवसायलाई अर्को चरणमा लैजानको लागि धेरै अवसरहरूको ढोका खोल्न सक्छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ तपाइँको गेमि g सामग्री को लागी ट्विच मा सफलतापूर्वक एक मजबूत अनुयायी आधार बनाउनु भएको छ भने, अरुहरु जो उनीहरु संग उही प्राप्त गर्न कोशिस गर्दैछन् तपाईले एकल गर्न वा तिनीहरु संग साझा टिप्पणी गर्न को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ। यस साझेदारीको सफलता दुबै अधिक आय र तपाईं दुबै को लागि अनुयायी दुवै लाई अनुवाद गर्न सक्दछ।
Audience. दर्शक रुचि र प्राथमिकताहरूको ज्ञान
तपाइँको अनुयायीको आधार बढ्दै जाँदा, तपाइँले आफ्नो कोठाको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस्, जुन तपाईंको च्यानलमा जडान भएका शीर्षकहरूका कुराकानीहरू अवलोकन गर्ने कार्य हो। यसले तपाईंको दर्शकलाई के मूल्यवान् छ बुझ्न मद्दत गर्दछ। कुराकानी कोठामा उनीहरूसँग कुराकानीले तपाईंलाई श्रोताहरूसँग के संघर्ष गरिरहेको छ र उनीहरूलाई उत्तम अपील गर्ने सामग्री क्राफ्ट गर्नमा मद्दत गर्दछ।
तपाइँको दर्शकहरु संग राम्रो सम्बन्धित गर्न, यो टोन र भाषा मान्छे संचार गर्न प्रयोग हेर्न उपयोगी छ। युवा मानिसहरू र पुराना पुस्ताहरूका बीचमा हुने संचारको प्रकारमा भिन्नताहरू हुन सक्छन्। यो को हो भन्ने बारे सोच्नुहोस् जुन तपाईं प्राय: लक्षित गर्न चाहनुहुन्छ र त्यस अनुसार तपाईंको सामग्री क्युरेट गर्नुहोस्।
More. थप जडानहरू
बढ्दो लोकप्रियताको साथ, तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरू समक्ष आउनुहुनेछ जो राम्रो कनेक्शन हुन सक्ने हुन सक्छ। एक वफादार प्रशंसक आधार को साथसाथै, तपाईं पियर सामग्री स्ट्रिमरहरू, रिपोर्टरहरू, अन्वेषकहरू, इत्यादिहरूसँग पनि जडान विकास गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक जडानले तपाईंलाई तपाईंको च्यानल बढ्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ जबकि अन्यहरूलाई मद्दत गर्दछ।
More. बढि बिक्री
जब तपाईं फलोअरहरूको ठूलो संख्या प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईंको सामग्री धेरै आकर्षक लाग्नेछ, र तपाईं धेरै बिक्री पाउनुहुनेछ। यसले तपाईंलाई समान प्रकारको उत्पादन प्रदान गर्ने अन्यमा प्रतिस्पर्धात्मक धार दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ ट्वीचमा एक हास्य कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र १०,००,००० अनुयायीहरू छन्, जबकि त्यस्तै किसिमका मनोरञ्जनको प्रस्ताव राख्ने एक प्रतिस्पर्धीसँग केवल १०० अनुयायीहरू छन्, सम्भाव्य अनुयायीहरू तिनीहरूको च्यानलको सट्टामा तपाईंको च्यानलमा ट्युन गर्नेछन्। एक ठूलो निम्नलिखित राखी तपाईंको च्यानल सामाजिक रूप मा व्यवहार्य बनाउँदछ यो राम्रो, मनोरन्जनकारी सामग्री को एक प्रदाता को रूप मा तपाईंको विश्वसनीयता लाई बृद्धि गर्दछ।
Content. सामग्री लोकप्रियता
ठूलो दर्शकहरूले तपाईंको सामग्री व्यापक रूपमा फैलाउन मद्दत गर्न सक्छ। दैनिक सामग्री बनाउने र साझा गर्नाले तपाईंको सामग्री तपाईंको नेटवर्कहरू र तपाईंको फलोअरहरूको नेटवर्कहरू बीच फैलियो। यदि तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरू सफल छन् भने, तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंको खेल सयौं वा हजारौं पटक दिन साझा गर्न सक्दछ। यसले तपाइँको ब्रान्डमा कस्तो असर पार्दछ भन्ने कल्पना गर्नुहोस् र तपाइँ स्ट्रिमर / सिर्जनाकर्ताको रूपमा।
9. सुधारिएको विश्वास स्तर
दिनको अन्त्यमा, तपाईले भूमिका खेल्नु भएको भूमिकामा सन्तुष्ट हुनुहुनेछ जुन तपाईंले साझा चासो र आवेगका साथ व्यक्तिहरूको समूहलाई एकताबद्ध गर्न खेल्नु भएको छ। यस समूहको आयोजक हुनुले तपाईलाई आफ्नो उपलब्धिहरुमा गर्व महसुस गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईंको सफलताले तपाईंलाई आफूमा भएको विश्वास र विश्वास सुधार गर्न मद्दत गर्दछ जबकि तपाईंलाई आफ्नो काम परिष्कृत गर्नको लागि विशेषज्ञता दिनुहुन्छ।
म मेरो ट्विच च्यानलमा कसरी अनुयायीहरू बढाउन सक्छु?
ट्विचमा तपाईका अनुयायीहरूको संख्या बढ्दै विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाई यसलाई शुल्क तिरेर गर्न चाहानुहुन्छ भने त्यो उत्तम छ। तर यदि तपाई नि: शुल्क धेरै अनुयायी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने त्यो अझ उत्तम छ!
ट्विचलाई एक राजस्व जेनरेटरको रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा सत्यता छः यसले तपाईंलाई व्यापक रूपमा मद्दत गर्न सक्दछ यदि तपाईंसँग तपाईंको च्यानलमा अनुयायीहरूको लगातार बढ्दो संख्या छ भने। सुरुमा, तपाईले धेरै अनुयायीहरू देख्न सुरू गर्नुभन्दा पहिले यसले केही मेहनत लिन सक्छ। केहि सावधान र रणनीतिक योजनाको साथ, तपाइँ तपाइँको स्ट्रिमिंग खाताबाट एक सफल क्यारियर बनाउनको लागि तपाइँको मार्गमा हुनेछ।
यदि तपाईं नि: शुल्क ट्विच फॉलोअर्स प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको विपरीत, यदि तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया मार्केटिंग बजेटबाट केहि पैसा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यहाँ यसका लागि बहु विकल्पहरू पनि छन्। यद्यपि यो सँधै सल्लाह दिईन्छ कि भुक्तान गरिएकोमा फर्किनु अघि तपाईको स्वतन्त्र विकल्पहरू निकाल्नुहोस्।
नि: शुल्क बढ्दो ट्विच फलोअरहरूको फाइदाहरू
यदि तपाइँ भर्खरै तपाइँको ट्विच च्यानलको साथ सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, सुरुमा तपाइँका अनुयायीहरूलाई बढाउन नि: शुल्क विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई बजेट-मैत्री तरीकाले तपाईंको विचारहरूको प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। यसले तपाईंलाई कसरी स्वतन्त्र र भुक्तानी रणनीति अवस्थित छ विभिन्न प्रकारको अनुसार तपाईंको च्यानल कसरी बढाउन सक्दछ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
कि संग, हामी केहि तरिकाहरु को लागी हेर्नुहोस् तपाई नि: शुल्क आफ्नो ट्विच अनुयायीहरु बढाउन सक्नुहुन्छ।
१. फ्री ट्विच फलोअरहरूका लागि Streamular.com प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं स्ट्रिमुलर.कटमा यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ, नि: शुल्क ट्वीच अनुयायीहरूको अग्रणी प्रदायक, त्यसैले यसले केवल बुझ्छ कि हामी हाम्रो सेवा उल्लेख गर्दछौं। जहाँसम्म पूर्वाग्रह भए पनि, हामीले हाम्रो प्लेटफर्मलाई अत्यन्तै उपयोगकर्ता मैत्री र अत्यन्तै सजिलो बनाउनको लागि विकास गरिसकेका छन जो कोहीलाई नि: शुल्क ट्विच फॉलोअर्स प्राप्त गर्न चाहान्छन्। समान रुचिहरूको अन्य ट्विच प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र पछ्याएर, बदलामा, हाम्रो नेटवर्कसँग समान रुचिहरूको अन्य ट्विच प्रयोगकर्ताहरू तपाईंलाई पछ्याउँदछन्।
तपाइँ नि: शुल्क योजना दैनिक सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि सक्रिय गर्न दिनदिन पछि आउनुहुनेछ। यसैले, तपाइँ अनन्तसम्म तपाइँको ट्विच खाता नि: शुल्क विकास गर्न अनुमति दिदै।
यदि तपाईं स्ट्रिमुलर.कट. को भ्रमण गर्ने काममा रुचि राख्नुहुन्न र अन्य प्रोफाइलहरू पनी अनुसरण गर्नुहुन्छ जब तपाईं अरू ट्विच फलोअरहरू चाहानुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले सशुल्क योजनामा ​​अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईलाई ० व्यक्तिको अनुसरण गर्न र स्वचालित रूपमा चल्नु आवश्यक छ, तपाईका अनुयायीहरूलाई डेलिभर गर्दै प्रोफाइल दैनिक औंला उठाउनको लागि वा वेबसाइटमा फिर्ता आउन बिना।
हजारौं ट्विच प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो सेवा मार्फत नि: शुल्क ट्विच फलोअरहरू प्राप्त गर्न सुरू गर्दछन्, तर सबै भन्दा प्रभावकारी नतिजाहरूको लागि हामी तपाईंको अन्य चीजहरू बढ्नको लागि सिफारिस गर्दछौं। तपाइँको ट्विच फलोअरहरूलाई नि: शुल्क बढाउनको लागि बढि तरिकाहरूको बारेमा जान्नको लागि कृपया पढ्नुहोस्।
२. अरू स्ट्रिमरहरू द्वारा सञ्चालित ट्विच च्यानलहरू हेर्नुहोस्
एक सामाजिक मञ्च हो, ट्विच मात्र तपाईं मद्दत गर्न सक्दछ यदि तपाईं यसमा जडान गर्नुभयो भने। तपाई यो धेरै तरीकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य स्ट्रिमरहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र उनीहरूको स्ट्रिमिंग सामग्री हेर्नुहोस्। कुराकानी कोठामा उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहोस् र दुबै स्ट्रिमरहरू र प्रशंसकहरूको सन्देशहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अरूको सामग्रीको बारेमा बढि जान्नको लागि चासो देखाउनुहोस् र उनीहरूको ज्ञानमा उनीहरूको प्रशंसा गर्नुहोस् वा यदि तपाइँ तिनीहरूको सामग्री रोचक पाउनुहुन्छ।
जब अन्य प्रयोगकर्ताहरूले देख्छन् कि तपाईं रमाईलो र अनुकूल छ, तिनीहरूले तपाईंलाई पछाडि पछ्याउन चाहन्छन्। यदि एक लोकप्रिय स्ट्रिमरले तपाईंलाई पछ्याउने निर्णय गर्दछ भने, सम्भावना यो छ कि तिनीहरूको प्रशंसकहरूले तपाईंलाई पछ्याउन सुरु गर्नेछन्।
अन्य स्ट्रिमरहरूसँग सम्बन्ध विकास लाभदायक छ किनकि तपाईं एक अर्कालाई आफ्नो च्यानलहरू होस्ट गर्न वा प्रमोट गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। साझेदारीले तपाईको ब्रान्डको राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ र तपाईको ब्रान्ड पहिचान ठूलो मात्रामा निर्माण गर्न सक्दछ। जब यस्तो साझेदारीहरू बनाउने बेला, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं साँच्चिकै अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग मित्रता गाँस्न चाहानुहुन्छ। यसले तपाईलाई कसैको प्रतिष्ठा हुनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ जसले केवल अरूलाई आत्म-पदोन्नतीको लागि सोध्छ।
Online. अनलाइन घटनाहरू र मीटअपहरूमा भाग लिनुहोस्
अन्य प्रयोगकर्ताहरू र अनुयायीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुले तपाईंलाई व्यक्तिहरूको रुचिहरू र उनीहरू कसरी ट्विचलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने भन्ने बारे बढी ज्ञान जुटाउन मद्दत गर्दछ। ट्विच बाहिरका व्यक्तिहरूसँग जडान हुन प्रयास गर्नुहोस्। अनलाइन बैठक, सम्मेलनहरू, र समान सामाजिक बैठकहरूमा भाग लिनुहोस् जहाँ तपाईं अरूलाई अलि बढी राम्ररी चिन्नुहुन्छ।
तपाईं स्ट्रिमिंग घटनाहरूमा जान वा भिडियो गेम बैठकहरूमा जान रोज्न सक्नुहुन्छ जुन प्रत्येक बर्ष विश्वका प्रमुख शहरहरूमा हुने गर्दछ। यो नि: शुल्क ट्वीच फलोअरहरू विकास गर्न, नयाँ साथीहरू बनाउन, र अरूले के गरिरहेछन् भन्ने बारे उत्तम तरीकाहरू मध्ये एक हो। सुपानोभा, माइनकॉन, र ट्वीच कोन केही लोकप्रिय ट्विच घटनाहरू हुन् जसमा तपाईं सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं साना ट्विच मीटअपहरू जुन तपाईंको शहर वा अनलाइनमा भइरहेको हुन सक्छ को लागी फेसबुक र ट्विटर हेर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रमहरूमा जडानहरू गर्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको व्यवसाय कार्डलाई उपस्थितहरूलाई बीचमा दिनु हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रयोगकर्तानाम ट्विचमा साथ साथै तपाईंको अन्य सामाजिक मिडिया खाताहरूमा लिंकहरू। तपाईको बारेमा सजिलैसँग यो जानकारी प्राप्त गर्न उपयोगी छ किनकि अरूले तुरून्त उनीहरूको यन्त्रहरूबाट तपाइँसँग सम्पर्क गर्न सक्दछन् जब उनीहरूले सूचना पाउँछन्।
Other. अन्य सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरु प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै ट्विच प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको ब्राण्डको एक्सपोजर बढाउनको लागि उनीहरूको अन्य सामाजिक मिडिया च्यानलहरूको उपयोगको महत्त्व थाहा छैन। यो जहाँ शीर्ष ट्विच प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो नेटवर्कको अधिकतम उपयोग गर्दछ। इन्स्टाग्राम, ट्विटर, र स्न्यापचट जस्ता साइटहरूले ट्वीच प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूका अनुयायीहरूलाई अपडेट गर्न र उनीहरूसँग नियमित रूपमा कुराकानी गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंले सोशल मिडिया च्यानलहरूको अधिक प्रयोग गर्नुपर्दछ किनभने यसले तपाईंलाई आफू र तपाईंको ब्रान्डलाई विश्वभरका विभिन्न भागहरूमा बस्ने सम्भावित अनुयायीहरूको परिचय गराउन मद्दत गर्दछ। आजको उच्च ग्लोबलाइज्ड विश्वमा, सोशल मिडियाले शारीरिक खाडलहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ र समान रुचिहरू र गतिविधिहरूको बारेमा दर्शकहरूलाई उत्साहित बनाउँदछ।
तपाईंको जीवनको बारेमा अपडेटहरू पोस्ट गर्न तपाईंको सामाजिक मीडिया खाताहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। यसलाई नयाँ सामग्रीको बारेमा तपाइँका अनुयायीहरूलाई बताउन प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो च्यानलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मतदानको रूपमा वा अन्तर्क्रियात्मक प्रश्नोत्तरको रूपमा तपाईंको अनुयायीहरूसँग छलफल गर्न जहाँ तपाईं आफ्नो सामग्रीमा पृष्ठपोषण लिन सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूसँग सामजिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको ब्रान्डको सकरात्मक छवि निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ जुन अनुयायीहरू अन्तर्क्रियाको लागि तत्पर छन्।
दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँको ट्विच सामग्री को बारे मा स्वचालित ट्वीटहरु पोस्टिंग को रूप मा आकर्षक छैन। यसको सट्टामा, तपाईं आफ्नो रुचिहरू साझा गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ, परियोजनाहरू जुन तपाईं काम गरिरहनु भएको छ, चीजहरू जुन तपाईंलाई चासो लाग्दछ, वा तपाईंको अर्को स्ट्रिम के हुनेछ भनेर अपडेट गर्दछ। यसले तपाईंको च्यानललाई अधिक निजीकृत गर्न मद्दत गर्दछ।
Streaming. स्ट्रिमिंगका लागि तालिका विकास गर्नुहोस्
ट्विचमा वफादार निम्न निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ? लगातार र लगातार स्ट्रिमि schedule तालिकामा टाँसिनुहोस्। तपाइँको श्रोताको समय भन्दा पहिले नै उनीहरूको सामग्री अद्यावधिक गर्नुहोस् जब उनीहरू तपाइँको सामग्री हेर्नको लागि ट्युन इन गर्नुपर्छ। एक समय तालिका बनाउनुहोस् र यसलाई तपाईंको दर्शकहरूसँग साझा गर्नुहोस्। यो मानिससँग विश्वास निर्माण गर्ने र दैनिक अवलोकनलाई प्रमोट गर्ने एक अद्भुत तरीका हो।
लगातार स्ट्रिमिंग तालिका अपनाउनु मात्र तपाईको विश्वास कमाउँदैन। यसले तपाईंलाई पेशेवरको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ जसले उनीहरूको स्ट्रिमिंग कार्यलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् र राम्रो सामग्री साझा गर्ने बारेमा इरादा राख्छ। यदि तपाइँ सामिल हुनुहुन्न र दैनिक तालिकामा टाँसिनुहुन्न भने, तब दर्शकहरू जसले तपाइँको सामग्री मनपराउँदछन् र यसको अधिक हेर्न चाहानुहुन्छ धेरै हेर्ने छैन। नतीजाको रूपमा, तिनीहरू अरू कसैको ट्विच च्यानलमा वा अन्य नेटवर्कि other साइटहरूमा जान्छन्।
एकचोटि तपाईंले अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्न थाल्नु भएपछि, तिनीहरूलाई व्यस्त राख्नको लागि पर्याप्त महत्त्वको छ यदि तपाईं वास्तवमै स्ट्रिमरको रूपमा क्यारियर निर्माण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने। धेरै स्ट्रिमरहरू नियमित रूपमा सामग्री साझा गर्नको लागि योजना विकास नगरेको गल्ती गर्दछन्। तालिका वरिपरि काम गर्दा तपाईंलाई संगठित रहन र तपाईंको च्यानल जस्तो भिन्न छैन जो अरू जस्तो भन्दा फरक छैन।
तपाईंको दर्शकहरूसँग तपाईंको सामग्री तालिका साझेदारी गर्नुहोस् उनीहरूलाई बताउनको लागि जब तिनीहरूले ट्विचमा तपाईंलाई फेला पार्न आशा गर्न सक्छन्। तपाइँ के खेलिरहनु भएको छ र कुन समयमा समावेश गर्नुहोस्। यदि, कुनै कारणका लागि, तपाईंको तालिकामा परिवर्तनहरू छन् भने, परिवर्तनको बारेमा तपाईंको दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न तपाईंको सामाजिक मिडिया च्यानल वा ट्विच च्यानल फिड प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्। यसले इच्छुक दर्शकहरूलाई तपाईंको सामग्रीको प्रतिक्षा गर्न अनुमति दिनेछ जब यो देखा पर्दछ र भविष्यमा तपाईंको च्यानलमा फर्केर आउनको लागि कारण पनि दिन्छ।
अर्को कुरा यो हो कि तपाइँ सामग्री बारम्बार स्ट्रिम गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। बारम्बार स्ट्रिम गर्नाले र लामो अवधिको लागि तपाईंको व्यक्तिले याद गर्ने संभावनाहरू बढाउँछन्। तपाईंको श्रोताहरूलाई प्रशस्त सामग्री प्रदान गरेर, तपाईं उनीहरूलाई उनीहरूको संसाधनको लागि मूल्य दिदै हुनुहुन्छ, जसले तपाईंको च्यानलमा उनीहरूको वफादारी र व्यक्तिगत लगानीलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्दछ।
तपाइँ कसरी नि: शुल्क ट्विच फलोअरहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारे थप जान्नको लागि, हामीलाई यहाँ सन्देश पठाउनुहोस्, र हामी तपाईंसँग बिभिन्न विकल्पहरू छलफल गर्न खुसी हुनेछौं!
मलाई किन नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू चाहिन्छ?
हामी सबैलाई थाहा छ कि धेरै ट्विच फ्यानहरू भएको तपाईंको ट्विच खातामा धेरै फाइदाहरू छन्। जब तपाईंसँग अधिक प्रशंसकहरू छन्, तपाईं अधिक लाइकहरू, अधिक टिप्पणीहरू, र अधिक विचारहरू प्राप्त गर्न प्रवृत्ति गर्नुहुन्छ।
यसले वास्तवमै जीउ बनाउने प्रयास गर्दछ वा ट्विचको प्रयोग गरेर एक्सपोजर प्राप्त गर्न। "फ्रि ट्विच फलोअरहरू" उद्योगमा नेताहरू भएको वर्ष पछि, हामीले प्रत्येक दिन धेरै ट्विच फॉलोअर्सहरू पाउन प्रयोगकर्ताहरूको लागि १००% नि: शुल्क प्रणाली विकास गरेका छौं। तिनीहरू उच्च गुणवत्ताका छन् र तपाईंको रुचिहरूमा लक्षित छन्।
के यो ट्विच अनुयायीहरू वास्तविक छन्?
हामी वास्तवमै हाम्रा सशुल्क ग्राहकहरूलाई वास्तविक प्रशंसकहरू प्रदान गर्दछौं, त्यहाँ बाहिर वेबसाइटका of 98% भन्दा फरक छ। प्राय: अन्य वेबसाइटहरूले यो नि: शुल्क सेवा प्रस्ताव गरेको दावी गर्छन्, तर ती गर्दैनन्! हामी यो नि: शुल्क सेवा प्रदान गर्न सक्षम छौं किनकि हाम्रो फलो serviceफलो सेवा प्रयोग गरी प्राप्त गर्ने हरेक प्रशंसक आफैं जस्तो अर्को प्रयोगकर्ता हो।
हाम्रो सेवा त्यस्तो समुदाय हो जुन दिमाग भएका मानिसहरूलाई एक अर्को भेट्टाउन र सम्पर्क गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। हामी केवल मध्यस्थ छौं। वास्तविक अनुयायीहरू प्रदान गरेको दावी गरेर साइटहरू धोका नदिनुहोस्। यो सँधै भनिएको छ कि यदि यो सत्य हुन एकदम राम्रो देखिन्छ भने, यो सम्भवतः हुन्छ ... र पूर्ण पारदर्शी हुन, हामीले ध्यान दिनुपर्दछ कि अनुयायीहरूको गुणवत्ता फरक हुनेछ। यो किनभने केहि मानिसहरु अरु भन्दा आफ्नो खाताहरु मा धेरै अधिक प्रयास गर्छन्। यो समग्रमा ट्विचको बारेमा पनि उस्तै हो।
त्यसोभए, यदि एक मिनेट वास्तवमा कूल ब्रान्डले तपाईंलाई पछ्याउँछ भने अर्को मिनेटमा केही फोटाहरूसहित नियमित व्यक्तिले चिन्तित नहुनुहोस्। तपाईका अनुयायीहरूको दायराको बाबजुद सबै तपाईलाई पठाइएको छ, तिनीहरू समान रुचिहरूमा चयन हुन्छन् जुन तपाईंले हाम्रो सेवाको लागि साइन अप गर्नुभयो।
म कसरी मेरो ट्विच फलोअरहरू राख्न सक्छु?
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि नयाँ व्यक्तिहरू नि: शुल्क तपाईंको ट्विच पेजमा पुर्‍याउनु हाम्रो काम हो।
तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नु तपाईंको काम हो। अध्ययनले देखाउँदछ कि यदि तपाईंको पृष्ठसँग धेरै सामग्री छैन वा नयाँ र आकर्षक सामग्री नियमित आधारमा प्रदान गरिरहेको छैन भने तपाईंको नम्बरहरू गिरावट हुँदैछ।
समान रुचि भएका व्यक्तिहरू प्रदान गर्न हामी सकेसम्म राम्रो गर्छौं। यसको मतलव तपाईको पृष्ठ मानेर तपाईको छनौटहरु को बारे मा सामग्री प्रदान गरीरहेको छ स्वतन्त्र वा भुक्तान योजना सक्रिय गर्नु अघि तपाईले आफ्नो पृष्ठ लाई कायम राख्न र बढाउन सक्नुहुन्छ।
विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् कि दिन मा १- times पटक गुणस्तरीय सामग्री पोष्ट गर्नु राम्रो नतीजाहरु लाई आकर्षित गर्दछ। तपाईको पोष्टको साथ तपाईंको समय लिनु महत्वपूर्ण छ। निश्चित गर्नुहोस् कि फोटो / भिडियोहरू उच्च गुणवत्ताका छन् र तपाईंको इन्स्टाग्रामको थिममा सम्बन्धित छन्। अन्तमा, तपाइँको दर्शकहरु संग कुराकानी गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि उनीहरूले तपाईंको पोष्टहरूमा टिप्पणी गरे तिनीहरूलाई जवाफ निश्चित गर्नुहोस्। तिनीहरूको पृष्ठ भ्रमण गर्ने र तिनीहरूलाई एक वा दुई मनपर्दो दिईकन विचार गर्नुहोस्। यो तपाईंको पृष्ठसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध सिर्जना गर्न आउँदछ।
XNUM Xth 24
ट्विचमा स्ट्रिमिङ च्यानल सुरु गर्न तपाईंले आवश्यक गियरहरू
अधिक र अधिक सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू, विशेष गरी गेमरहरू, ट्विच भनिने लाइभ-स्ट्रिमिङ भिडियो प्लेटफर्ममा फर्किरहेका छन्, र राम्रो कारणहरूका लागि। आफ्ना फ्यानहरूसँग अन्तरक्रियालाई महत्त्व दिने रचनाकारहरूका लागि...
XNUM Xth 15
ट्विचले कसरी घृणा आक्रमणहरू विरुद्ध लडिरहेको छ?
ट्विचको गगनचुम्बी लोकप्रियताले स्ट्रिमरहरूको लागि केही नराम्रो खबर पनि ल्याएको छ। हालका महिनाहरूमा, धेरै ट्विच स्ट्रिमरहरूले घृणित छापाहरू रिपोर्ट गरेका छन्, अर्थात्, प्रयोगकर्ताहरूले ट्विचको छापा प्रयोग गर्दै...
XNUM Xth 7
भिडियो सामग्री सिर्जनाको संसार परिवर्तन गर्न ट्विचको भूमिका
पछिल्लो दुई दशकहरूमा, भिडियो सामग्री सिर्जनाको लोकप्रियता आकाश छ। दुबै स्वतन्त्र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र ब्रान्डहरू भिडियो सामग्रीमा परिणत भएका छन् र सफलताको स्वाद लिएका छन्,...
हामी अधिक मार्केटिंग सेवा प्रस्ताव गर्दछौं
ट्विच सेवाहरु Instagram सेवाहरू ट्विटर सेवाहरू Pinterest सेवाहरू YouTube सेवाहरू स्पेटिफ सेवाहरू SoundCloud Services
इन्स्टाग्राम सेवाहरूको लागि, कृपया हाम्रो पार्टनर वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्, MrInsta.com। तिनीहरूको इन्स्टाग्राम सेवाहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यूट्यूब सेवाहरूको लागि, कृपया हाम्रो पार्टनर वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्, SubPals.com। यूट्यूब सेवाहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
के तपाईं दैनिक, नि: शुल्क, उच्च गुण र लक्षित ट्विच फलोअरहरू चाहनुहुन्छ?
हजारौं व्यक्तिहरू सामेल हुनुहोस् पहिले नै स्ट्रिमुलर प्रत्येक एक दिन प्रयोग गर्दै नि: शुल्क ट्विच फलोवरहरू पाउन र तिनीहरूको च्यानलहरूको लागि मनपर्दछ!
नि: शुल्क, उच्च गुण र ट्वीच अनुयायीहरू ट्वीच मार्केटिंग सेवाहरूको इन्टरनेटको विश्वसनीय प्रदायकबाट केहि क्लिकहरू पाउनुहोस्।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ स्ट्रिम्युलर। सर्वाधिकार सुरक्षित। साइटमैप